9 Nhengo dzemuviri dzauri kukuvadza nekusvuta
Marwadzo uye kuzvimba mumajoini ako? Vakasvuta vanonyanya kuda kuwana rheumatoid arthritis (RA). Uye mishonga yeRA haishande zvakare pane vanhu vanosvuta. Masayendisiti aren & rsquo chokwadi.
Unogona kutarisira maburi, nekukurumidza. Kusvuta kukwirisa kukwirisa kweganda rako. Zvinogona kuita kuti epidermis yemakore makumi mana ekuberekwa iratidzike senge yeasina kusvuta-makore makumi manomwe ekuberekwa. Uku kukuvara hakugone kuitwa uye kunogona kuita kuti zvirwere zveganda zvakawanda, zvakaita segomarara reganda, zvinyanye.
Kuvhenekera kunoita kuti iwe uwane nguva senge yekuwana macular degeneration, eye eye mamiriro ayo anoparadza iwo epakati chiratidzo iwe waunoda kuverenga, kunyora, uye zvakare kuona zvimwe zviso zvevamwe vanhu. Iwe zvakare uri katatu katatu mukana wekukura cataract, izvo zvinokonzeresa kuona.
Yako Bonde Nhengo
Izvo ndezvechokwadi: Varume vanoputa vanowanzo kuve ne erection dysfunction (ED). Uye kana uchingogara uchiputa, zvinowedzera kuipa. Varume vanosvuta vanowanzo batwa negomarara repamazamu. Uye vatambi vechikadzi vanonyanya kubata gomarara remuchibereko.
Tender, kubuda ropa matadza; inorwadza halitosis! Chirwere cheGum ndicho chinonyanya kukonzera kurasikirwa mazino. Kana iwe uchisvuta, saka iwe uri ka2 nguva sekugona kuve nayo, uye kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiputa
Kana iwe uchisvuta, saka iwe unopfuura katatu katatu mukana wekuita sitiroko - ropa rinovhara mukati mehuropi iro rinogona kukonzera chero huwandu hwezvinhu, zvinosanganisira kumeso kuoma mitezo, kuona kwakashata, kunetseka kufamba, uye dzimwe nguva kufa. Iwe unowedzerwazve kuve neropa rekumanikidza, iro rinogona kutungamira kune imwe cerebral aneurysm. Apa ndipo apo madziro eropa mutsinga mupfungwa dzako mabharuni achibuda. Inogona kudonha kana kuputika uye jekiseni ropa munyama iri padyo.
Peptic ulcers, Crohn Disease, colon polyps, pancreatitis (kuzvimba mupascreas), uye gomarara repancreas zvimwe zvezvirwere zvine chekuita nekuzeya zvaunonyanya kuwana kana uchisvuta. Iwe uri makumi matatu nematatu akajairwa kuwana mhando 35 chirwere cheshuga mellitus, icho chinokanganisa chiropa chako nepancreas.
Kanzera yemapapu - yakabatana nekusvuta muzana yenguva - ndicho chinonyanya kukonzera kufa kwekenza muUS muvarume nevakadzi zvakaenzana. Kusvuta kunoitisa zvimwe zvakawanda zvegomarara zvingangodaro, senge kanzuru dzemuromo, chiropa, itsvo, weti dundira, rwatata, dumbu, colon, uye anus. Uyezve ndicho chikonzero chikuru cheCOPD (chisingaperi obstructive pulmonary chirwere), boka rezvirwere zvinokanganisa zvidiki zvemweya mumapapu.
Kusvuta ndicho chikonzero chakakosha chechirwere checoronary, umo vanhu vazhinji muUS vanofa nekenza dzakabatana. Inokurumidzira uye inoderedza tsinga dzako, uye inokonzeresa ropa rako kuita gobvu uye kugwamba, izvo zvinogona kutungamira kune myocardial infarction.
Iwe ungadai usiri pane ino saiti dai iwe usina kana shuwa yekurarama hutsi husina hupenyu.
Raira yako Tabex nhasi!